Ubudlelwane: Iziphumo zeCoolidge kunye nokufuna izinto ezintsha | Isiseko soMvuzo
Ikhaya ubudlelwane I-Coolidge Impact
Kukho isiphako kwisicwangciso sendalo, ibug kwinkqubo, ukuba uyathanda. Ukuhlala phantsi nomntu wokuqala esithandana naye kunye nokuhlala sibophekile akunakunceda ukusasaza iigeni zethu. Ukusasazeka kwemfuza yeyona nto iphambili kwinombolo yendalo. Ulonwabo lwethu ngabanye alubonakali kwisicwangciso. Ke phantse zonke izilwanyana ezincancisayo, kubandakanya thina bantu sizakhele ngaphakathi, indlela yakudala eyabizwa zizazinzulu I-Coolidge Impact. Iyasebenza ukusenza ukuba sifune amaqabane 'okuthandana' xa umsebenzi wethu wokuchumisa ubonakala usenziwa. Isebenza nge ukunyamezela ukwakha, okanye isithukuthezi, naloo mntu okanye inkuthazo. Ngokuhamba kwexesha ubukho babo buba buncinci 'obunomvuzo' kwingqondo yokuqala. Ngokuhamba kwexesha sinomnqweno omncinci nangaphantsi weqabane elifanayo lezesondo.
Apha kulapho igama elithi "Isiphumo seCoolidge" kucingelwa ukuba livela khona. UMongameli noNksk. Coolidge baboniswa [ngokwahlukeneyo] malunga nefama karhulumente yokulinga. Xa [Nksk. UCoolidge] weza eyadini yenkukhu waqaphela ukuba umqhagi uhlangana kakhulu. Ubuze lo mncedisi ukuba kwenzeka kangaphi loo nto kwaye uxelelwe, "amaxesha amaninzi suku ngalunye." UNksk. Coolidge wathi, "Xelela uMongameli xa esiza." Akuba exelelwe, uMongameli wabuza, "Inkukhu enye qho?" Impendulo yathi, "Hayi, Mnu. Mongameli, isikhukukazi esahlukileyo maxa onke." UMongameli: "Xelela uNksk. Coolidge."
Amafama ayakwazi oku njengokuba iinkunzi zeenkomo ziyakudibana kunye nenkomo kanye ngexesha lonyaka. Baza kufuna iinkomo ezintsha ebaleni ukuze bachumise wonke umhlambi. Le nkqubo yakudala yokusasaza uninzi lwemfuza ngeenxa zonke, ayihambelani nobomi bethu obuphucukileyo namhlanje. Sifuna ukubopha kwaye sihlale sizibophelele ixesha elide. Iinkolo kunye noluntu lusebenzise zonke iintlobo zezicwangciso zokujikeleza le bug-ukuvumela amadoda ukuba abe nabafazi abaninzi, ukubatshata besebancinci kunye nokukhuthaza iintsapho ezinkulu ukuba zigcine zixakekile, kwaye zibajonga ngamehlo iinkosikazi njl.
Iziphumo zeCoolidge kunye ne-Porn
Yiyo le mpazamo kwi-biology yethu, umphumo weCoolidge, oye wavumela i-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ukuba i-mushroom ibe yishishini leebhiliyoni ezininzi. Ngokukhawuleza nje ukuba umntu 'achumise ukuze anelise' iqabane lesini elizimisele ngokuzithandela, baya kuyeka. Oku kuyenzeka nokuba ngumfanekiso nje omnye. Emva koko ingqondo ivelisa "ukungayilandeli" i-dopamine encinci kwaye izingele ijikeleze amathuba amatsha okuchumisa. Ngokujikeleza i-10 yezigidi zevidiyo ezibonisa amanyala ezisetyenziswa e-UK kuphela yonke imihla, akukho kunqongophala kwabalingane abazimiseleyo. Konke oku kuqhubeka kwinqanaba lokungazi kodwa kuchaphazela indlela yokuziphatha kwansuku zonke.
Iindaba ezimnandi zezokuba akufuneki sibanjiswe sisiphumo seCoolidge. Thina bantu sikrelekrele xa sibeka iingqondo zethu kuyo. Ngokufunda ukunciphisa iziphumo zedopamine eninzi kwingqondo kunye nokulungisa kwakhona ibhalansi kunye ne-oxytocin engakumbi ukunciphisa amanqanaba oxinzelelo, sikhuthaza ukubopha ngothando kunye nokunxibelelana. Oku kuzinzile kwaye kusinceda siphumelele ngokobuqu kunye nangokubambisana. Ngolwazi oluthe kratya koku sicebisa le webhusayithi ukuba iyiyo www.reuniting.info.
<< Uthando njengoNqweno weSondo Ukunciphisa inkanuko yesini >>